MB 2015 Oktobra, Fiangonana Maneran-tany Soisa (WKG)
Fiteny hafa- Alemanina- Anglisy- Italiana- Française- Español- Português- Holandey- Danemark- Finnish- Soedoa- Norvezianina- poloney- Biolgara- Rosiana- Katalana- Basque- Irlandey- Welsh- Islandey- Grika- Gaelika Scottish- Tiorka- Slovenian- Okrainiana- romanianina- Armeniana- Azerbaijani- Litoanianina- Belarosiana- Estonianina- Georgia- Hongria- Galisiana- Bosnianina- Makedoniana- Albaney- Slovak- Czech- Kroasia- Corsican- Kurdear (Kurmanji)- Latina- esperanto- hebreo- Persiana- Arabo- Japoney- Koreana- Shinoa (nentim-paharazana)- Shinoa (Simplified)- Filipiana- Indonezianina- Latvian- Vietnamianina- Maltais- Thai- Hindi- Afrikaans- Malay- Swahili- Creole Haitian- Bengali- Java- Khmer- Lao- Maori- Marathi- Mongoliana- Nepali- Punjabi- Somali- Tamil- Kazakh- Malagasy- Hawaiian- Kyrgyz
Sambatra vetivety noho ny fifaliana maharitra
Rehefa nahita io endrika ara-tsiansa momba ny fahasambarana io tao amin'ny lahatsoratra iray amin'ny Psychology Today 1 Nihomehy mafy aho:
Na dia mitondra fahasambarana eo noho eo aza izany fandaharana tsy misy dikany izany, dia tsy fifaliana maharitra. Azafady azafady fa diso; Tiako ny mihomehy tsara toy ny olon-drehetra. Izany no antony nankasitrahako ny fanambaran'i Karl Barth: «Hehy; no zavatra misongadina indrindra momba ny fahasoavan'Andriamanitra. »Na dia samy mampihomehy antsika aza ny fahasambarana sy ny fifaliana, misy fahasamihafana lehibe eo amin'izy roa. Fahasamihafana izay hitako tamin'ny taona maro lasa izay rehefa maty ny raiko (eto isika aseho miaraka eo amin'ny ankavanana). Mazava ho azy fa tsy faly tamin'ny fahafatesan'ny raiko aho fa nahazo toky aho ary nahazo fampaherezana avy tamin'ny fifaliana rehefa nahafantatra fa nahatsapa ho akaiky an'Andriamanitra mandrakizay izy. Nitohy tamiko ny fieritreretana an'ity zava-misy mahafinaritra ity. Miankina amin'ny fandikan-teny, ny Baiboly dia mampiasa ny teny hoe sambatra sy fahasambarana 30 eo ho eo, raha toa ka 300 heny kosa ny fifaliana sy ny fifaliana. Ao amin'ny Testamenta Taloha dia mitovy ny teny hebreo (fifaliana sy fifaliana ary fifaliana) nampiasaina amin'ny fandrakofana zavatra niainana maro, toy ny firaisana ara-nofo, fanambadiana, fiterahana, fijinjana, fandresena ary fisotroan-divay (Hiran'ny Hira 1,4; Ohabolana 05,18; Salamo 113,9; Isaia 9,3 ary Salamo 104,15). Ao amin'ny Testamenta Vaovao, ny teny grika "chara" dia ampiasaina indrindra hanehoana fifaliana amin'ny asa fanavotan'Andriamanitra, ny fahatongavan'ny zanany (Lioka 2,10) sy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty (Lioka 24,41). Rehefa mamaky izany ao aminny Testamenta Vaovao isika dia takatsika fa ny teny hoe fifaliana dia mihoatra noho ny fahatsapana iray fotsiny; toetran'ny Kristiana io. Ny fifaliana dia ampahany amin'ny voa vokatry ny fiasan'ny Fanahy Masina.
Hahafantatra tsara ny fifaliana azontsika isika amin'ny asa tsara amin'ny fanoharana momba ny ondry very, ilay vola madinika very ary ilay very lahy (Lioka 15,2: 24) jereo. Amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fampihavanana ny hoe "very" no ahitantsika eto ny endrika lehibe namboarin'Andriamanitra ho fifaliana. Ny soratra masina koa dia mampianatra antsika fa ny tena fifaliana dia tsy voataonan'ny toe-javatra ivelany toy ny fanaintainana, ny fanaintainana ary ny fatiantoka. Ny fifaliana dia mety ho vokatry ny fijaliana noho ny amin’i Kristy (Kolosiana 1,24). Na dia manoloana ny fijaliana mahatsiravina sy mahamenatra azy aza amin'ny hazo fijaliana, dia niaina fifaliana lehibe i Jesosy (Hebreo 12,2).
Fantatsika ny zava-misy mandrakizay, ny ankamaroantsika dia nahatsapa fifaliana marina na dia tokony hanao veloma amin'ny olon-tiana iray aza isika. Marina izany satria misy fifandraisana tsy tapaka ao amin'ny fitiavana sy ny fifaliana. Fantatsika izany amin'ny tenin'i Jesosy rehefa namintina ny fampianarany ho an'ny mpianany izy: «Lazaiko aminareo izany rehetra izany mba ho tanteraka tanteraka ny fifaliako ary ho tanteraka ny fifalianareo. Ary izao no didiko: izao dia tokony hifankatia tahaka ny nitiavako anareo. » (Jaona 15,11-12). Tahaka ny hitomboanay ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, dia toy izany koa ny fifaliantsika. Raha ny marina dia mitombo ao amintsika ny voankazo rehetra avy amin'ny Fanahy Masina rehefa mitombo amin'ny fitiavana isika.
Tao anatin'ny taratasiny ho an'ny fiangonan'i Filipo izay nosoratan'i Paoly fony tany Roma dia nanampy antsika hahatakatra ny fahasamihafana misy ny fahasambarana sy ny fifaliana. Tao amin'ity taratasy ity dia nampiasa ny teny fifaliana sy fifaliana ary fifaliana in-16. Nitsidika fonja sy fonja maro be aho, ary mazàna dia tsy hahita olona faly any. Saingy nifatotra tao am-ponja i Paul, ary nahatsapa fifaliana fa tsy mahalala na ho velona na ho faty izy. Noho ny finoany an'i Kristy dia vonona ny hahita ny zava-misy iainany amin'ny mason'ny finoana amin'ny hazavana hafa tsy toy ny hitan'ny ankamaroan'ny olona. Jereo ny nosoratany ao amin'ny Filipiana 1,12: 14:
«Ry rahalahiko malala! Tokony ho fantatrao fa ny fitazomana ahy talohan'ny fitsapana dia tsy nanakana ny fiparitahan'ny filazantsara. Mifanohitra amin'izany! Efa lasa mazava ho an'ireo mpiambina ahy rehetra eto izao ary amin'ireo mpandray anjara amin'ny fizotrana hafa ihany koa fa voafatotra aho satria mino an'i Kristy. Ankoatr'izay, tamin'ny fahababoana ahy dia maro ny kristiana nahazo fahasahiana sy fatokisana vaovao. Mitory ny Tenin'izy ireo amim-pahasahiana sy tsy matahotra izy ireo. »
Ireo teny mahery ireo dia avy amin'ny fifaliana anaty izay niainan'i Paoly na dia teo aza ny zava-nisy teo aminy. Fantany hoe iza izy ao amin'i Kristy ary Kristy ao aminy. Nanoratra toy izao izy ao amin'ny Filipiana 4,11: 13:
«Tsy miteny izany aho mba hisarihana ny sainao amin'ny filako. Farany dia nianatra niatrika ny toe-javatra rehetra aho. Na kely aho na be dia be, zatra tsara aho ary dia afaka miatrika ny roa avy aho: afaka afa-po sy noana aho; Mety hijaly noho ny tsy fahampiana sy ny be dia be aho. Azoko atao avokoa izany rehetra izany amin'ny alàlan'i Kristy, manome hery sy tanjako. »
Azontsika atao ny mamintina ny tsy fitovian'ny fahasambarana sy ny fifaliana amin'ny fomba maro.
Tsy maharitra vetivety ny fahasambarana, matetika dia vetivety ihany, na vokatry ny fahafaham-po fohy. Ny fifaliana dia mandrakizay ary ara-panahy, fanalahidin'ny fahafantarana hoe iza Andriamanitra sy izay nataony, inona no hataony ary hataony.
Satria miankina amin'ny antony maro ny fahasambarana. Izy io dia tsinontsinona, lalina na matotra. Mivoatra ny fifaliana rehefa mitombo ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy amin'ny olon-kafa rehetra.
Ny fahasambarana dia avy amin'ny zava-miseho ara-nofo, ivelany, fandinihana ary fihetsika. Ao aminao ny fifaliana ary avy amin'ny asan'ny Fanahy Masina.
Satria Andriamanitra nahary antsika mba hifaneraserana amin'ny tenantsika, tsy misy zavatra hafa mahafa-po ny fanahintsika ary mitondra fifaliana maharitra. Finoana no mitoetra ao anatintsika ary miaina ao aminy isika. Satria tsy miaina ho an'ny tenantsika intsony isika dia afaka mifaly amin'ny toe-javatra rehetra, na dia amin'ny fahoriana aza (Jakoba 1,2), izay hampiray antsika amin'i Jesosy izay nijaly ho antsika. Na dia teo aza ny fijaliany mafy tao am-ponja, i Paoly dia nanoratra ao amin'ny Filipiana 4,4 hoe: "Mifalia fa an'i Kristy Jesosy; ary indray mandeha te-hiteny izany aho: mifalia!"
Jesosy dia niantso antsika hanana fiainana feno fahafoizan-tena ho an'ny hafa. Eto amin'ity fiainana ity dia misy fanambarana tsy mazava toa izao: "Raha te hitandrina ny fiainanao amin'ny volany ianao dia very izany, fa raha mampiasa ny fiainanao ho ahy ianao dia haharesy azy mandrakizay." (Matio 16,25). Amin'ny maha-olombelona antsika, dia matetika isika tsy miahiahy momba ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fitiavana ary ny fahamasinana mandritra ny ora na andro. Nefa azoko antoka fa rehefa mahita an'i Kristy amin'ny voninahiny rehetra isika dia hikasika ny lohanay ary hiteny hoe "Ahoana no ahafahako mandinika tsara amin'ny zavatra hafa?"
Mbola tsy mahita an'i Kristy mazava araka izay tiantsika. Miaina ao anaty kianja izahay, mba hiteny ihany, ary sarotra ny maka sary an-tsaina ny toerana tsy nalehantsika hatramin'izay. Sahirana loatra isika miezaka ny ho tafavoaka velona amin'ny banga hidirana ny voninahitr'Andriamanitra (jereo ihany koa ny lahatsoratra hoe "Ny fifaliana famonjena"). Ny fifaliana mandrakizay dia mahatonga ny fahafantarana ny fijalian'ity fiainana ity ho fotoana ahazoana fahasoavana, mamantatra an'Andriamanitra ary hatoky azy lalindalina kokoa. Mianatra mankasitraka ny fifalian'ny mandrakizay isika na dia mbola miady amin'ny fatoran'ny ota sy ny olana rehetra eto amin'ity fiainana ity aza. Hankasitraka vatana be voninahitra kokoa isika rehefa avy niaina ny fanaintainan'ny vatantsika. Mino aho fa izany koa no antony nahatonga an'i Karl Barth nilaza hoe: "Ny fifaliana no endrika fankasitrahana tsotra indrindra." Afaka feno fankasitrahana isika fa napetraka teo anoloan'i Jesosy ny fifaliana. Izany dia nahafahan'i Jesosy niaritra ny hazo fijaliana. Torak'izay koa, ny hafaliana napetraka teo anoloanay.
Miarahaba sy mankasitraka,
Filoha GRACE COMMUNION INTERNATIONAL
1 Ny psikolojika "The Equation Equation" dia ny 22 Aogositra 2014
Zon'ny mpamorona © 2021 | NY FIVORIANA AN'ANDRIAMANITRA (SWITZERLAND) | CONTACTS | LEGAL NOTES | Fitsipika | MAIL